Nhau - HAND DRYER BRUSHLESS MOTOR
Sezvo chirevo chichienda: "Chigaro chakanaka chinofamba zvakanaka nebhiza", simba rinobva FEEGOO rekuomesa ruoko rinogadziriswa chaizvo izvo mamiriro ezvinhu aripo iye zvino - brushless motors, sezvatinoziva tese, makuru uye madiki brushless motors anoshandiswa mune akawanda In. munda weArtificial Intelligence (AI). Saka ndekupi kushandiswa kweiyo brushless mota yemuomese wemaoko? Heino mhinduro yemunhu wese:
ECO9966 ruoko dryer ine frequency kutendeuka brushless mota.
Chekutanga : Brushless mota maitiro
Iyo brushless DC mota inoumbwa nemota muviri uye mutyairi, uye yakajairika mechatronic chigadzirwa. Sezvo iyo brushless DC mota ichimhanya mukuzvidzora modhi, haizo wedzera kutanga kutenderera kune rotor senge injini inotangwa inotangwa pasi pemutoro unorema pasi peinosiyana frequency kumhanyisa mutemo, uye haizokonzere oscillation uye kunze-kwe-nhanho. apo mutoro unoshanduka kamwe kamwe. Iwo magineti echigarire epakati uye madiki emagetsi brushless DC mota zvino anyanya kugadzirwa neasingawanzo pasi neodymium iron boron (Nd-Fe-B) zvinhu zvine yakakwira magineti simba chigadzirwa. Naizvozvo, vhoriyamu yepasi isingawanzo gineti magineti brushless mota idiki saizi imwe pane iyo yetatu-chikamu asynchronous mota yehumwe huwandu. Kazhinji, idiki muhukuru uye yakakwirira musimba.
Chechipiri: Musiyano uripo pakati pebhurashi mota uye brashi mota
Kana mota yakabhurwa ichishanda, coil necommutator zvinotenderera, asi magineti nekabhoni mabhurashi haatenderere. Iyo inochinjika yazvino kutungamira kwecoil inoshandurwa neanoenda uye mabhurashi anotenderera nemota. Muindasitiri yemotokari yemagetsi, mabhurashi mota akakamurwa kuita akakwira-kumhanya bhurashi mota uye yakaderera-kumhanya bhurashi mota..
High friction uye kurasikirwa kukuru
Shamwari dzehunyanzvi dzakasangana nedambudziko iri pakutamba nemabhurashi mota zvisati zvaitika, ndiko kuti, mushure mekushandisa mota kwenguva yakati rebei, mota inoda kuvhurwa kuti ichenese kabhoni brashi yemotor, iyo inotora nguva uye inorema, uye kusimba kwekuchengetedza hakusi pasi pekuchenesa imba.
2. Kupisa kukuru kwechizvarwa uye hupenyu hupfupi
Nekuda kwechimiro chemota yebhurashi, kusangana kwekupokana pakati pebhurashi uye commutator yakakura kwazvo, izvo zvinoita kuti kupokana kwese kwemota kuve kwakakura uye nyore kugadzira kupisa. Iyo magineti yekusingaperi chinhu chinopisa. Kana tembiricha yakakwira zvakanyanya, iyo magineti ichaita demagnetize, Kuita kwemota kunodzikiswa, uye hupenyu hwesevhisi hwemota yakabhurwa inokanganiswa.
3. Kushanda kwakaderera uye simba rakaderera
Dambudziko rekupisa kwemota yakabhurowa yataurwa pamusoro apa inonyanya kukonzerwa nekuti ikozvino inoitwa pakupikiswa kwemukati kwemota, saka simba remagetsi rinoshandurwa kuti rive kupisa kusvika pamwero mukuru, saka simba rekubuda remota yakabhurwa iri. kwete yakakwirira uye kubudirira hakusi yakakwirira.
Zvakanakira brushless motors
Iyo brushless DC mota inoumbwa nemota muviri uye mutyairi, uye yakajairika mechatronic chigadzirwa. Nekuti brushless DC mota inoshanda nenzira yekuzvidzora
1. Hapana brashi, kupindira kwakaderera
Iyo brashi isina mota inobvisa bhurashi, uye shanduko yakananga ndeyekuti hapana spark yemagetsi inogadzirwa kana mota yebhurashi ichimhanya, izvo zvinoderedza zvakanyanya kukanganiswa kwemagetsi spark kune kure kure inodzora redhiyo.
2. Mutsindo wakaderera uye kushanda zvakanaka
Iyo brushless mota haina bhurashi, kukweshera kwakadzikira zvakanyanya panguva yekushanda, oparesheni inotsvedza, uye ruzha rwakaderera zvakanyanya. Iyi bhenefiti itsigiro huru yekugadzikana kweiyo modhi.
3. Hupenyu hurefu uye mutengo wakaderera wekuchengetedza
Pasina bhurashi, kupfeka kwebrashiless mota kunonyanya kubereka. Kubva pamechanical point yekuona, iyo brushless mota ingangoita yekuchengeta-isina mota. Pazvinenge zvakakodzera, chete vanofanira kuita imwe guruva kubvisa kugadzirisa. Kuenzanisa yapfuura uye inotevera, tinoziva zvakanakira brushless motors pamusoro brushed motors, asi zvose hazvina mhedziso. Maitiro ekuita kwebrashiless mota senge yakanakisa yakaderera-kumhanya torque kuita uye hombe torque haidzokerike kune brushless mota, asi maererano nekureruka kwekushandisa kwebrashiless motors, nekudzikira kwemutengo wemabhurasha controller uye kusimudzira uye kukwikwidza kwemusika kwebrushless. matekinoroji kumba nekune dzimwe nyika, brushless simba masisitimu ari mudanho rekukurumidza kukura uye kukurumbira, izvo zvakare zvinokurudzira zvikuru Kuvandudzwa kweiyo modhi kufamba.
Chechitatu, kukwikwidzana kwezviratidzo zvakasiyana-siyana zvekuita
1. Chikamu chekushandisa:
Brushless mota: inowanzo shandiswa mumidziyo ine zvine mwero zvinodiwa zvekutonga uye kumhanya kwakanyanya, senge mhando dzendege, zviridzwa zvemazvo, nezvimwewo, zvine kudzora kwakasimba kwekumhanya kwemota uye kumhanya kwakanyanya.
Carbon brush motors: kazhinji midziyo yemagetsi inoshandisa mabhurashi motors, senge anoomesa bvudzi, mafekitori mota, emumba emhando hood, nezvimwe. Pamusoro pezvo, kumhanya kweiyo mota inoteedzana inogona kusvika yakakwira zvakanyanya, asi nekuda kwekupfeka kwekabhoni brashi, shandisa. Hupenyu hauna kunaka semabhurashi asina mota.
2. Hupenyu hwebasa:
Brushless motors: Kazhinji hupenyu hwesevhisi huri muhurongwa hwemakumi ezviuru zvemaawa, asi hupenyu hwesevhisi hwemabhurashi motors hwakasiyanawo zvakanyanya nekuda kwekutakura kwakasiyana.
Carbon brashi mota: Kazhinji, hupenyu hunoenderera mberi hwekushanda hwebhurashi mota mazana akati wandei kusvika anopfuura chiuru maawa. Iyo carbon brush inoda kuchinjwa kana muganhu wekushandisa wasvika, kana zvisina kudaro zviri nyore kukonzera kupfeka kwekutakura.
3. Shandisa maitiro:
Brushless mota: kazhinji dhijitari frequency shanduko yekudzora, yakasimba controllability, kubva mashoma marevolutions paminiti kusvika kumakumi ezviuru ekuchinja paminiti anogona kuwanikwa nyore.
Carbon brashi mota: Iyo yekare kabhoni brashi mota inowanzo shanda nekumhanya nguva dzose mushure mekutanga, uye kukurumidza kugadzirisa hakusi nyore. Iyo yakatevedzana mota inogona zvakare kusvika 20,000 rpm.
Asi hupenyu hwebasa huchava hupfupi.
4. Kuchengetedza magetsi:
Zvichienderana nekutaura, iyo brushless mota inodzorwa neinverter tekinoroji inochengetedza simba rakawanda kupfuura mota dzakateedzana. Anonyanya kugadzirwa inverter air conditioners uye mafiriji.
5. Maererano nekugadzirisa mune ramangwana, iyo carbon brush motor inoda kuchinjwa. Kana ikasatsiviwa nenguva, mota ichakuvadzwa. Iyo brushless mota ine hupenyu hurefu hwesevhisi, kazhinji kanopfuura ka10 iyo yebhurashi mota, asi inoda kutsiviwa kana ikaputswa. Motokari, asi kugadzirisa kwezuva nezuva hakudiwi.
6. Hunhu hweruzha hahuna chekuita kana iri mota yakabhurwa, asi zvakanyanya zvinoenderana nekuenderana kwekutakura uye zvikamu zvemukati zvemota.
Iyo parameter index yemuenzaniso brushless mota, mukuwedzera kune zviyero (yekunze dhayamita, kureba, shaft dhayamita, nezvimwewo), uremu, voltage renji, hapana-mutoro wazvino, yakanyanya ikozvino uye mamwe ma paramita, kune zvakare yakakosha index- KV kukosha, inova Yakasarudzika performance parameter ye brushless mota idata rakakosha rekutonga maitiro ekuita kweiyo brushless mota.
(FEEGOO) Chii chinonzi brushless mota inoshandiswa muair-jet hand dryer yakatsvagwa naFeegoo Technology?
① Iyo brushless mota inotora electromagnetic steering uye haiite chero kubata ne rotor.
② Iyo kabhoni brashi mota inoshandisa kutenderera kwe rotor, bhurashi rinogara richikwizwa nemhete yekuchinja, uye spark erosion inoitika panguva yekuchinja, saka bhurashi chikamu chisina njodzi mumotokari yese. Panguva imwecheteyo, imwe guruva rakanaka richagadzirwa panguva yekurwisana ne rotor.
Brushless mota: indasitiri yezvigadzirwa zvemukaka, indasitiri yekubikisa, indasitiri yekugadzira chigadzirwa chenyama, indasitiri yekugadzira soya, indasitiri yekugadzira zvinwiwa, indasitiri yekugadzira makeke, indasitiri yemishonga, fekitori yemagetsi, uye mamwe maworkshop asina guruva ane zvinodiwa zvepamusoro.
Carbon brashi mota: Inogona chete kushandiswa mumhando dzese dzezvimbuzi uye dzimwe nzvimbo uko zvinodiwa zvisina kunyanya kukwira, asi haigone kushandiswa senge isina guruva musangano!
Brushless mota: Inogona kushanda inoramba ichishanda kweanosvika zviuru makumi maviri maawa, uye yakajairwa hupenyu hwesevhisi makore 7-10.
Carbon brush motor: Inogona kushanda zvakaramba kwemaawa angangoita mazana mashanu, uye hupenyu hwesevhisi hwemazuva ese makore 2-3.
Brushless mota: Inomhanya nekumhanya kukuru kwe90-95m/s, uye mhedzisiro chaiyo inogona kusvika ngano yemaoko akaoma mu5-7s.
Carbon bhurashi mota: kumhanya kumhanya uye nguva yakaoma yakadzikira zvakanyanya pane iyo brushless mota.
Zvichienderana, mashandisirwo emagetsi ebhurashi mota ingori 1/3 yeiyo kabhoni brashi.
5. Maererano nekugadzirisa kweramangwana, kana carbon brush motor yapera, kwete kungotsiva carbon brush, asiwo shandura zvigadziro zvakapoteredza motokari zvakadai segiya rinotenderera. Mutengo wacho wakakwira zvikuru. Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti basa rose richabatwa.
6. Ruzha rwekabhoni brashi motors rwakanyanya kudarika iyo yemabhurashi motors.
7. Chiyero chekugadzirisa kwebrashiless mota yedu yakatevedzana zvigadzirwa zviri mukati me1%, nepo chiyero chekugadzirisa kabhoni brashi zvigadzirwa zvakati wandei.